Soo dejisan MuseScore 2.0.3 – Vessoft
Soo dejisan MuseScore
MuseScore – software ah muyuusigu iyo tafatirka ee sheet music ah. Muuqaaladan weyn ee MuseScore ka mid ah tirada xad lahayn khadadka sheet, customization of qaabka qoraalka iyo sheet music, la shaqeeya tabta, bedelka dura iwm MuseScore nidaamka template la ogaaday oo kuu ogolaanaya in aad si loo badbaadiyo iyo shuban Hababka kala duwan ee xubno muusikada. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u qariyaan ama bandhigay palette, jeclo, keyboard biyaano iyo synthesizer Help. Sidoo kale MuseScore kuu ogolaanayaa inaad galaan qoraalada ka keyboard computer ama keyboard MIDI dibadda.
Khadadka sheet badan oo
The editor qoraalka dhisay-in
Configures guddi gacanta
La shaqee keyboard MIDI ah
MuseScore Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... PeaZip 6 Standard iyo Portable